Maro adag jaamaha dayactir screen suuqa kala - Shiinaha County Wuqiang Huili Maro
Maro adag jaamaha dayactir screen window
Maro adag screen suuqa kala jaan dayactir sidoo kale loo magacaabay Kit Maro adag dayactirka Screen, Self eekoow Patch Screen, dayactir screen balastar, Maro adag u baaraan balastar.
Koolo taageeray jaamaha Maro adag loo isticmaalaa in lagu godad dayactir iyo ilmo ee daaqadaha ama albaabada screen. qalabka No loo baahan yahay. 5 Pack Waxyaabaha: Maro adag Color: Dhuxusha Self dhegi screen Reach dayactir balastar: 3 "Width: 3" loo isticmaalaa in lagu dayactiro godad iyo ilmo ee daaqadaha ama albaabada screen No qalabka loo baahan yahay. Firdhay.
Sidee si uu u xaliyo shaashad bakhtiistay
1: jar godka
Iska yaree god square agagaarka jeexitaanka isticmaalaya straightedge iyo mindi af badan utility. Ka dhig godka u duqeeyey sida ay suurto gal ah iyo ka tago ugu yaraan 1/2 ee. Shaashadda jir soo socota si ay birta ah.
2: Glue on go'da
Iska yaree balastar ah oo Maro adag u baaraan doonista dhabta in 1/2 ee. Rogmado kasta. Jiifay warqad wax ka yar screen uu furmo suuqa si ay u sii xabagta ka dusin in workbench ah. Xarunta go'da badan godka, codsan kuusha ah xabagta oo daloolkiisa ku wareegsan, oo ay ku kala xabagta ku dhex screen jaan iyo suuqa kala isticmaalaya ul a flat alwaax.
Haddii aad ku quudin jiray ilaa ay kaneecadu ku guuxayaan madaxa ku wareegsan iyo ilaalinta aad toosi habeenkii oo dhan, sida ku saabsan qamaar shaashadda? Baro noqon doonaa arki karo iyo ka eegi kartaa xoogaa tacky, sidaas darteed haddii jeex waa ballaadhan yahay ama screen waa meel heer sare ah la arki karo, bedeli screen oo dhan. Haddii kale, u qaataan 20 daqiiqo oo kaliya dhayida godka.
Haddii aad screen waa Maro adag (dareemi doonaa sida dhar), iibsan 1/2 ft. Ee Maro adag cusub baarista off kitaabkii duudduubnaa ee dukaanka hardware ama rugta gurigaaga ama weydiiso a cutoffs yaryar ah. Sidoo kale qaado labada xabagta caag ku salaysan ama Super Glue Saliid. Markaas raaci Photos 1 iyo 2. Furaha dayactir fiican-raadinta waxaa haysta straightedge adag ka dhanka ah workbench si aad u samayn kartaa cutout nadiif ah (Photo 1).
Haddii aad heysato screen aluminium la god yar, ka iibsan kit balastar dukaanka hardware ama xarunta guri. Waxaa jiri doona dhowr googgooyey 1-1 / 2-in. jaamaha iyo qabsatooyinkoodiiba, preformed in si toos ah u dhuujin si shaashadda.